यस साताका ७ तस्बिरमा चंगा उडाउँदै गरेका बालबालिकादेखि डा. गाेविन्द केसीकाे अनशनसम्म :
काठमाडौँ — चाँगुनारायण नगरपालिका दुवाकोटस्थित पाकेको धानखेतको बीचमा रहेको माटोको डिलमा बसेर चंगा उडाउँदै बालबालिकाहरू । तस्बिर : अंगद ढकाल
टिचिङ अस्पातलमा अनशनरत डा. गोविन्द केसी । तस्बिर : कबिन अधिकारी
बलात्कारका विरुद्ध पाटन दरबार परिसरमा प्ले कार्ड बोकेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी एक युवती । तस्बिर : सन्जोग मानन्धर
भक्तपुरको गुण्डुमा मखमली फूल टिप्दै महिला । यस वर्ष अधिकमास परेका कारण दसैं तिहार पछि सरेका छन् । तिहारका लागि किसानले रोपका फुलहरु फुल्न थालेपछि बजार पाउन गाह्रो रहेकाे बताएका छन् । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ
ललितपुरको सुनाकोठीमा बिहीबार डोजरले माटो सम्याउँदै । बढ्दो शहरीकरणसँगै उपत्यकामा खेतीयोग्य र भिराला जमिनसमेत घडेरीको लागि प्लटिङ गरी बेच्ने काम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । तस्बिर : केशव थापा
टेकुस्थित वाग्मती नदीको किनारबाट पानी निकाल्दै बालिका । तस्बिर : अनिश रेग्मी
कपिलवस्तु नगरपालिका–२ स्थित बर्दहवामा मुखमा मास्क लगाएर टायर गुडाएर खेल्दै बालकहरू । काेराेना संक्रमणबाट बच्न चिकित्सकहरूले मास्क लगाउन सल्लाह दिने गरेका छन् । तस्बिर : मनाेज पाैडेल
प्रकाशित : आश्विन २४, २०७७ १७:३९
यस वर्षको दसैंमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट नबाँड्ने
आश्विन २४, २०७७ यज्ञ बञ्जाडे
काठमाडौँ — यस वर्षको दसैंमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएकाले भिडभाड गरेर नयाँ नोट बाँड्ने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नयाँ नोट वितरण नगर्नेबारे राष्ट्र बैंकले औपचारिक सूचना जारी गरिसकेको छैन ।
तर, गत साता बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा यसबारे छलफल भइसकेको छ । नयाँ नोट वितरण नगर्नेबारे सम्भवत: सोमबार सूचना जारी गरिने स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले कोरोनाको जोखिम उच्च भएकाले पंतिबद्ध गराएर नयाँ नोट बाँड्ने अवस्था नभएको बताए । ‘यो वर्ष सर्वसाधारणको भिडभाड गराएर नयाँ नोट बाँड्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
अघिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्र बैंकले दसैंको अवसरमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको थियो ।
प्रकाशित : आश्विन २४, २०७७ १७:३६